Mogadishu Journal » Kooxda Chelsea ayaa kulkankeeda sadaxaad
Kooxda Chelsea ayaa kulkankeeda sadaxaad oo isku xiga Caawa ka badisay kooxda Newscastle oo ah koox adag lakiin waxaa xaaqay Wiilashada macalinka Taliyaaniga.
Chelsea ayaa 2-0 ku dhufatay kooxda Newcastle ciyaar ka dhacday garoonkeeda oo roob uu ka da’ayay waxaana goolkeeda hore ay ugu mahad celisay Hazard oo goo kulaad u dhaliyay bilowga ciyaarta halka Torres isna uu daba dhigay goolka labaad isla qaybta koowaad ee ciyaarta.
Newcastle oo la dhihi karay Chelsea iyada ayaa ku filan ayaa caawa bool bool loo kala furay taas oo ka dhigan Chelsea inay sanadkaan doonayso in dib ay ugu soo noqoto koobka Premier league oo looga bartay horay inay ugu guulaysato.
Sagaal dhibic ayay hogaanka ku qabatay Chelsea lakiin kooxaha kale ayay hal kulan ka dheertahay oo iyaga min labo kulan ciyaarayo.
Chelsea warka ay soo wado iyo Wabiga yaa weyn ayay arinta mareysaa.
Chelsea ayaa caawa waxaa ay ku soo shartagtay xidigahan